Izimbadada Isisekelo Namanzi Amnandi Ukunikeza Ukwelulekwa nge-COVID-19
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Unomthwalo wemfanelo » Izimbadada Isisekelo Namanzi Amnandi Ukunikeza Ukwelulekwa nge-COVID-19
Izindaba zase-Antigua neBarbuda • Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba zeBarbados Breaking • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Amasiko • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Investments • Izindaba zaseJamaica • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Izindaba zaseSanta Lucia • Ezokuvakasha • Iziphesheli Zokuvakasha | Izeluleko Zokuhamba • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Abantu abalwela ukubhekana nezinkinga ezihlobene ne-COVID-19 manje sebengafuna usizo kwi-Intanethi eSweet Water Foundation. Inombolo yosizo eyethulwe ngo-2018 yi Izimbadada Foundation kanye neSweet Water Foundation yokuqinisa amandla eGrenada okusiza ukuvikela izingane ebudloveni bezocansi, idlulisela izinsizakalo zayo kubo bonke abantu ngalesi sikhathi esingakaze sibonakale sobhadane lomhlaba wonke.
“Ngesikhathi se-COVID-19, kunjalo, senza ingxenye yethu ukusiza isizwe,” kusho Uchwepheshe Wezokuvikelwa Kwezingane kanye noMqondisi weSweet Water Foundation uDkt Hazel Da Breo kwiThe Grenadian Voice. Wengeze ukuthi selokhu i-COVID-19, cishe ama-50% wamakholi abo abehlobene ne-COVID-19.
UDkt. Da Breo uqaphele ukuthi yize ucingo lwosizo lwasungulwa ekuqaleni ukugxila ekuvikeleni izingane, izingcingo zitholakele zivela kwentsha, intsha, nabantu abadala abafuna izimpendulo mayelana nezocansi nezocansi kanye nezindaba zobudlelwano.
"Sisize namakhasimende ngemibono yokuzibulala," esho, ekhumbuza ukuthi umugqa wethegi "Noma yisiphi Isikhathi nganoma yisiphi isizathu."
Umsunguli uDkt DaBreo ubike ukuthi “Isici seWhatsApp sisetshenziswa kakhulu. Asigcini nje ngokuthola abantu abasha abafonayo, kepha amaklayenti amadala ahlala nathi kusukela ekuqaleni ngensizakalo egcwele, eyimfihlo yokwelulekwa online.
Uhlanganyele ukuthi kwikota yokuqala yango-2020, bangu-1,185 XNUMX ukuxhumana phakathi kukaWhatsApp, imiyalezo, ama-imeyili nezingcingo.
UHeidi Clarke, uMqondisi oMkhulu eSandals Foundation, unethemba lokuthi izinsizakalo zeSweet Water zizoba usizo.
“Njengoba imindeni emhlabeni wonke iphoqeleka ukuthi ihlale emakhaya, siyazi ukuthi leli qiniso elisha lingakhuphula izinga lokucindezeleka okukhulu ezinganeni nakubantu abadala okuholele ekwandeni kokuhlukunyezwa ngokomzwelo ngisho nangokomzimba. Ithimba laseSweet Water liqeqeshwe ngobungcweti, futhi samukela wonke amalungu omndeni waseGrenadia ukuthi afinyelele uma edinga usizo lokuhamba kulesi sikhathi esinzima. Ngokubambisana, singasizana ukugcina impilo enhle yengqondo nokuqinisa ubudlelwano obungcono, ”kusho uClarke.
Umtholampilo iSweet Water Foundation useWave Crest Apartment, eGrand Anse, eSt. Inabeluleki abaqeqeshiwe aba-3, ngamunye wabo ophendula ezindaweni ezahlukahlukene zokuxhumana. Kukhona futhi abelaphi ababili ababona amaklayenti ubuso nobuso.
I-Sweet Water Foundation Child Helpline ijoyine i-Child Helpline International (i-CHI), inethiwekhi yomhlaba wonke yezinombolo zosizo zezingane eziyi-181 emazweni ayi-147 futhi izosebenza ngendlela efanayo nezinye izinombolo zosizo ngaphakathi kwenethiwekhi.
Sekuyiminyaka engaphezu kwamashumi amathathu, iSandals Resorts International ibambe iqhaza ekubuyiseleni imiphakathi yendawo eziqhingini ezibiza ngokuthi yikhaya. Ukusungulwa kweSandals Foundation kwaba indlela ehlelekile yokwenza ushintsho oluhle ezindaweni zemfundo, umphakathi kanye nemvelo. Namuhla, iSisekelo siyisengezo sangempela sokupha somkhiqizo - ingalo esabalalisa ivangeli lethemba elikhuthazayo kuwo wonke amagumbi aseCaribbean. KumaSandals, ithemba eligqugquzelayo lingaphezu kwefilosofi, kungukubizelwa esenzweni.
Izindiza zosizo: 537-7867 noma 800-4444 noma i-imeyili [i-imeyili ivikelwe]
I-Israel manje ivumela abavakashi baseRussia nge-2 jabs ...